စစ်ဗျူဟာ၊တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ ဖောက်ခွဲရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေအပြင် CDM Major 48 ခေါင်းဆောင်ပြီး PSDFကို ဖွဲ့စည်း – PVTV Myanmar
·7months ago ·45 Comments
အာဏာရှင် စစ်ကောင်စီလက်အောက်က နှုတ်ထွက်လာတဲ့ CDM Major 48 ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ အတူ စစ်ဗျူဟာ၊တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ ဖောက်ခွဲရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ ပူးပေါင်းပြီး People Soldiers’ Defense Force (PSDF)ကို ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ PSDF က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေ နှုတ်ထွက်လာတဲ့ CDM ဗိုလ်ကြီးတွေထဲက စစ်ဗျူဟာဆိုင်ရာ အကြံပေးနဲ့ ဆက်ဆံရေးအရာရှိအဖြစ် ဗိုလ်ကြီးထက်မြတ်၊တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ စစ်ဗျူဟာဆိုင်ရာ အကြံပေး အဖြစ် ဗိုလ်ကြီးအေးချမ်းက တာဝန်ယူမှာဖြစ်ပြီး တိုက်ခိုက်ရေးနှင့် စစ်ဗျူဟာ ဆိုင်ရာတွဲဖက်အကြံပေးအဖြစ် ဗိုလ်ကြီးဇင်ယော်အပါအဝင် ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေးနဲ့ စစ်ဗျူဟာဆိုင်ရာအကြံပေးအဖြစ် ဗိုလ်ဇာနည်အောင်တို့ လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါအပြင် မြေပြင် အာဏာဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ဦးဆောင်လုပ်နေကြတဲ့ လုံခြုံရေးအရ အမည်လိုတဲ့ အရာရှိ၊စစ်သည်တွေနဲ့ တခြားကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တွေလဲ ပူးပေါင်းပါဝင် ဖွဲ့စည်းထာတဲ့အကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
PSDF အနေနဲ့ နိုဝင်ဘာထဲမှာ ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖြစ်တဲ့ ချောင်းဦး၊မြောင်၊မြင်းမူ၊ဆားလင်းကြီး၊ဒီပဲယင်း၊မြင်းခြံ အပါအဝင် မြေအောက် UG အဖွဲ့တချို့နဲ့ မဟာမိတ်အဖွဲ့အဖြစ် ပူးပေါင်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
2021-12-12 at 9:45 AM
2021-12-12 at 9:48 AM
Ar Lue says:
Major 48 ပါ ဆရာ Major 48ယောက်မဟုတ်ပါဘူး ဆရာ ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောပြတာပါ
2021-12-12 at 9:52 AM
ေခါင္းေဆာင္အရာ႐ွိ မ်ားကလဲ မိမိတို႔ ရပ္တည္ရာ ႏိုင္ငံ ႀကီးမ်ား နယ္ေျမမ်ားမွ လက္လွမ္းမွီရာ..စစ္ေက်ာင္းႀကီးမ်ား..ပညာ႐ွင္မ်ား..မွ. တိုက္ခိုက္ေရး. စစ္ေရး..စစ္ဗ်ဴဟာ.. လက္နက္ႏွင့္လက္နက္နည္းပညာမ်ား..စဥ္ဆက္မျပတ္သင္ယူ..နည္းယူေနၾကပါလို႔..တိုက္တြန္းပါရေစခင္ဗ်။
Aung Latt says:
2021-12-12 at 10:23 AM
အနီးကပ် ရန်သူက ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်
သဲဟိန္းဉီး သဲဟိန္းဦး says:
2021-12-12 at 10:29 AM
Ko Cho Aye says:
2021-12-12 at 10:32 AM
ကောင်းတာတော့ ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တူမီးကိုတောင်မနိုင်တဲ့ ဗျူဟာတွေနဲ့ဆက်သွားမလားလို့
2021-12-12 at 10:35 AM
တင့် တင့် says:
2021-12-12 at 10:40 AM
2021-12-12 at 10:53 AM
Thaung Thar Oo says:
2021-12-12 at 11:03 AM
2021-12-12 at 11:06 AM
ျပည္သူ႔ဘက္မွာ ရပ္တည္ရင္ ျပည္သူ႔စစ္သားပါ။ျပည္သူ႔စစ္သား မွန္ရင္ တန္ဘိုးထား ေလးစားၿပီးသားပါ။
ဘေးရန်ကင်းစွာဖြင့် အောင်ပွဲ ဆင်နိုင်ကြပါစေ
2021-12-12 at 11:46 AM
ထူး ငယ္ says:
2021-12-12 at 11:58 AM
ျပည္သူ႕ဘက္ေတာ္သားဗိုလ္ႀကီးမ်ားနဲ႔တကြ သူရဲေကာင္းမ်ားအားလံုးကိုဦးၫႊတ္အေလးျပဳပါတယ္ တိုက္တဲ့ပြဲတိုင္းအက်အ႐ံႈးမရိွေအာင္ျမင္ၾကပါေစ
Phoe Yee says:
2021-12-12 at 12:01 PM
2021-12-12 at 12:22 PM
2021-12-12 at 12:24 PM
Htwe Htwe Hla says:
2021-12-12 at 12:56 PM
2021-12-12 at 1:16 PM
2021-12-12 at 1:23 PM
Major 48 က ဗိုလ်မှုးအောင်ကောင်းခန့် ခံယူထားတဲ့ နာမည်ပါဗျ
48 ယောက် မဟုတ်ပါဘူး
Su Su Swe says:
2021-12-12 at 1:55 PM
U Khin Mg Win says:
2021-12-12 at 2:36 PM
Nanhla Dawei says:
2021-12-12 at 3:02 PM
Ma Ma Myat Thandar says:
CDM တဲ့ သတိေတာ့ ထားသင့္တယ္ သူတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ထိေန ခံရတာ
ကိုေဇယ်ာ … သူတို႔႕ေၾကာင့္..😩😪😭
Dyp Yintpaung says:
2021-12-12 at 3:24 PM
2021-12-12 at 3:41 PM
Thein Hti says:
ကဲ ကဲ says:
2021-12-12 at 5:38 PM
Ko Naing Oo says:
2021-12-12 at 6:16 PM
2021-12-12 at 7:19 PM
2021-12-12 at 7:43 PM
အစစအရာရာ သတိရှိကြပါ မိမိတို့၏လျို့ဝှက်ချက်တွေ သတင်းတွေမှာတင်ပြခြင်းများမလုပ်ပါနဲ့စိုးရိမ်လို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Tha Mein Htun says:
2021-12-12 at 8:42 PM
မ်ိဳး ဝင္း says:
2021-12-12 at 10:47 PM
2021-12-13 at 1:02 AM
2021-12-13 at 3:17 AM